Ngakho manje kungenzeka esiphethweni ukuthi abantu a fan of lezi imidlalo, kahle ukulahlekelwa kwabo! Inkinga abaningi 'anti-gamers’ zijabulela whinge ezimnandi zakudala kodwa kunezindlela ungagcina ukudla izimpilo kanye izandla besiza ngenjabulo bondliwa kanye wingers ngenjabulo kubayekise!
Thola umbimbi akho, thuma Ukumemeza out isimo ababiza wonke gamers nabo, ubani odlala imidlalo on Facebook uyazi ukubaluleka ubungane obukhulu ezosiza. Lokhu akukhona nje kuphela Pet Rescue too, yimuphi abalimi hardcore noma candy Crushers bayokujabulela ngizinwaya emuva yakho ukubuya kancane in ukubuya!
Uma esiphethweni obani abangane bakho zangempela wengeze nabo bonke uhlu smart. Khona njalo uthumele yini Pet Rescue nje qiniseka ukukhetha lolu hlu njengoba izilaleli zakho. Ungakwazi ngokuvamile ukhethe phakathi komphakathi, abangane, abangane abaseduze kanti iyiphi izinhla smart kungenzeka wenza. Thola ujwayelane zakho zobumfihlo, kungaba neze kulimaze ukuze uvuselele izilungiselelo zakho zonke manje bese vele!
Nciphisa izilaleli ukuba lapho lokusebenza besho egameni lakho, sonke sike wazibona imiphumela uhlelo lokusebenza gone wild, ethumela izicelo ukuqedela abangane okungahleliwe kwesokunxele kwesokudla isikhungo. Ngenani izilungiselelo bese zibe izilungiselelo lokusebenza bese ukhetha 'mina kuphela’ uzowathola umangale ukuthi siningi kangakanani lezi zinto post egameni lakho, no wonder abanye abantu uthole a little cranky! Bathi ngempela dont kudingeka wazi everytime ukudala firecracker noma kudlule umngane yabaphambili…game ngokwethembeka I (kakhulu) futhi zokusebenza ngisho ivinjiwe izindaba yami feed.
Ekhuluma luvimbe zokusebenza kungase ukhokhe ukucisha isimo kancane njalo manje bese uma copping a feedback kancane negative ngawe post singakanani, lutho too amadlingozi nje ukukhumbuza abantu ukuthi bakwazi ashaya kancane 'X’ ekhoneni lesidla of yimuphi post lokuvala it kusuka izindaba zabo feed ngokuphelele. Into scariest mayelana facebook yinani labantu abangenalo umqondo abakwenzayo ngempela!
Uma wanamathela ebhulohweni ukuthi udinga usizo kubangane bakho ukuwela nabangani bakho nje zingakutholi isicelo salawo wayeludinga kangakanani usizo (wazi lapho yayo yaba like a ihora lonke futhi une ezimbili maqembu amathathu kuphela) ungakwazi njalo unqamule kusuka facebook bese uqedela imisebenzi ngesandla. lokhu kusebenza Kusobala kuphela uma wena idivayisi ezifana ifoni.
Futhi ekugcineni ngeke ngempela tip facebook kodwa khumbula ukuthi ungaba 5 iphila ngamunye idivayisi oye the game zifakwe, kanjalo ipad, iPhone, laptop, bekhompuyutha (umzali / umlingani noma kwengane ifoni!)